Madaafiic Lagu Garaacay Difaacyada Xabashida Itoobiya. – Calamada.com
Madaafiic Lagu Garaacay Difaacyada Xabashida Itoobiya.
calamada July 5, 2016 1 min read
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa habeenkii xalay tiro madaafiic ah ku garaacay difaacyada iyo fariisimaha ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya ay ka sameysteen degmooyinka Diinsoor iyo Waajid ee wilaayada Baay iyo Bakool.
Madaafiicda ayaa la xaqiijiyay in si gaar ah loola beegsaday difaacyada Xabashida ee la badaasi degmo’iyadoona jugta ama dhawaaqa madaafiicda si aad ah looga maqlayay deegaano badan oo hoostaga labadaasi degmo.
Si rasmi ah looma xaqiijin karo khasaaraha Kufaarta Xabashida Itoobiya ka soo gaartay duqeyntaasi walow warar hoose ay sheegayaan iney jiraan khasaara Xabashidu kasoo gaartay duqeyntaasi.
Madaafiicdan ayaa kusoo aadaya xilli maalmihii u dambeeyay ciidamada Kufaarta Injirleyda Xabashida Itoobiya ay ka carareen deegaanka Buurdhuxulle iyo degmada Rabdhuura oo ka wada tirsan gobalka Bakool.
Previous: Dhageyso Darsiga 30-aad Ee Ù…Ø­Ø§Ø¶Ø±Ø§Øª Ø±Ù…Ø¶Ø§Ù†ÙŠØ©.
Next: Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Gobalka Shabeelada Hoose.